Zvatingatevedzera Pana Jesu | Upenyu hwaJesu
KUVA NETSIYE NYORO
Sezvo Jesu aiva munhu akakwana, pane zvimwe zvinhu zvinotambudza vanhu zvaasina kusangana nazvo iye pachake. Asi ainzwira vamwe tsitsi zvikuru. Aiva nechido chekuita zvinhu kunyange zvisina kumunakira kuitira kuti abatsire vamwe. Tsiye nyoro ndidzo dzaiita kuti adaro. Dzidza nezvemienzaniso yemaratidziro aakaita tsiye nyoro muZvitsauko 32, 37, 57, 99.
KUVA MUNHU ASINGATYISI KUTAURA NAYE
Vakuru nevaduku vainzwa vakasununguka kuuya kuna Jesu nokuti akanga asiri munhu aigara akangoti kwindi kana kuti aizvitora seakakwirira. Vanhu vainzwa vakasununguka kana vainaye nokuti vaiona kuti aivafarira. Kuti ucherechedze izvi ona Zvitsauko 25, 27, 95.
Jesu aigara achitaura naBaba vake nemwoyo wose, angava ari oga kana kuti aine vanamati vechokwadi. Akanyengetera pazviitiko zvakawanda, kwete pakudya chete. Ainyengetera achitenda Baba vake, achivarumbidza, uye aitanga avabvunza asati aita zvisarudzo zvakakura. Ona mienzaniso yepaakaita izvi muZvitsauko 24, 34, 91, 122, 123.
KUSANGOFUNGA ZVAKANAKIRA IWE CHETE
Pane dzimwe nguva dzekuti Jesu ainzwa achida kumbozorora achifurwa nemhepo asi aimbozvisendeka kuti abatsire vamwe. Akanga asina pfungwa yokuti zvinhu zvitange zvanakira iye. Panyaya iyi zvekare akaratidza muenzaniso wokuti titevedzere. Dzidza kuti muenzaniso uyu akauratidza sei muZvitsauko 19, 41, 52.
Jesu haana kungodzidzisa nezvokukanganwira chete. Akatoratidza kuti kukanganwira kwacho kunoitwa sei pamabatiro aaiita vadzidzi vake nevamwe. Fungisisa mienzaniso yepaakazviita muZvitsauko 26, 40, 64, 85, 131.
Zvakanga zvagara zvataurwa kuti vaJudha vakawanda vaizoramba Mesiya uye kuti vavengi vake vaizomuuraya. Saka zvaiva nyore kuti Jesu anzwe nungo dzekubatsira vanhu. Pane kuti adaro akashanda nesimba pakutsigira kunamata kwechokwadi. Akaratidza vateveri vake vose muenzaniso wekutevera pakuramba vachishingaira kunyange vanhu vakasavateerera uye vakavapikisa. Ona Zvitsauko 16, 72, 103.
Pane zvinhu zvakawanda zvaisiyanisa Jesu nevanhu vane chivi, zvakadai seruzivo neuchenjeri zvaaiva nazvo. Zviri pachena kuti semunhu akakwana aipfuura vamwe pasimba uye pakuva nepfungwa dzakapinza. Asi aizvininipisa achishumira vamwe. Uchawana zvidzidzo nezvenyaya iyi muZvitsauko 10, 62, 66, 94, 116.
KUVA NEMWOYO MUREFU
Jesu aigara achiitira vaapostora vake nevamwewo vanhu mwoyo murefu pavaikundikana kumutevedzera uye kuita zvaaitaura. Airamba achivapa zvidzidzo zvaivabatsira pakuita kuti varambe vachiswedera pedyo naJehovha. Fungisisa mienzaniso yepakaratidzwa naJesu mwoyo murefu muZvitsauko 74, 98, 118, 135.